शेयर बजारमा सामान्य बृद्धि, कारोवार रकम सात अर्ब « Dainik Online
शेयर बजारमा सामान्य बृद्धि, कारोवार रकम सात अर्ब
काठमाडौं । लगातार दोहोरो अङ्कको वृद्धि तथा कारोवार रकममा समेत नयाँनयाँ कीर्तिमान कायम गरेको शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज भने झिनो अङ्कले मात्रै उकालो लागेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज नेप्से ३.३५ बिन्दुले उकालो लागेर दुई हजार बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक भने आज १.७७ बिन्दुले ओरालो लागेर ३८३.७९ मा पुगेको छ । नेप्सेमा झिनो अङ्कको सुधार भए पनि कारोवार रकम भने पनि रु सात अर्ब बराबरको नै भएको छ । कूल १९७ कम्पनीको एक करोड ८५ लाख ७६ हजार ७०८ कित्ता शेयर रु सात अर्ब ४० करोड ४१ लाख ५४ हजार सात मा कारोवार भयो ।
स्टकका अनुसार आज कारोवार भएका कूल १२ उपसमूहमध्ये पाँच उपसमूहको शेयर उकालो लाग्दा सात उपसमूहको शेयर भने ओरालो लागेको छ । बैंकिङ ४१.४३, व्यापार १०७.६४, होटल २०.८२, विकास बैंक ५२.८४, वित्त ७.४३, निर्जीवन बीमा ३४ र सामूहिक लगानी कोष ०.१८ बिन्दुले ओरालो लागे ।
यस्तै, जलविद्युत् ३८.६३, उत्पादन ९९.८१, अन्य १०७.७, लघुवित्त १.४३ र जीवन बीमा २१६.८३ बिन्दुले उकालो लागे । स्टकका अनुसार आज कारोवारका आधारमा नेपाल पुनरबीमा कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको रु ६५ करोड ७९ लाख ८८ हजार १०२ बराबरको कारोवार भयो ।
यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी रु ४४ करोड ३६ लाख ५० हजार ३९९, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रु ३३ करोड ९० लाख ३५ हजार १६८, नेपाल बङ्गलादेश बैंक रु २५ करोड २६ लाख २४ हजार ५९६, प्रभु बैंक रु २० करोड ८५ लाख ६० हजार ५३, शिवम् सिमेन्ट रु २० करोड ३७ लाख २२ हजार ९८२ र नबिल बैंक रु २० करोड ११ लाख ९४ हजार ६६० बराबरको कारोवार भई शीर्ष स्थानमा रहे ।
स्टकका अनुसार आज पुनरबीमा कम्पनी ९.९७, रसुवागढी हाइड्रोपावर ९.९६, माथिल्लो तामाकोशी ९.८५, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी ९.७१, साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्ताले ९.६८ प्रतिशतले कमाए । यस्तै, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक ७.७३, नेपाल बङ्गलादेश बैंक ५.६८, बोटलर्स नेपाल तराई ५.३२, मल्टीपर्पोज फाइनान्स ५.११ र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनका लगानीकर्ताले ४.५० प्रतिशतले गुमाए ।
म पनि अपांग नै हुँ, अर्काको किड्नीको बैशाखी टेकेर हिँडेको छु : ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पनि ‘अपांग’ भएको भन्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई हरेस
४७ हजारले जागिर खान पाउने गरि भर्ना खुल्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि गणक तथा सुपरिपेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान भएको छ
डाक्टर भगवान कोइराला भन्छन्- जिन्दगी अनिश्चित छ, राम्रो काम गर्नू
काठमाडौं । मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा बरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाको पत्थरीको शल्यक्रिया
पुल निर्माणमा खटिएका कामदारले पाएनन् ज्याला
सिमकोट । पुल निर्माणमा खटिएका कामदारले ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन् । विसं २०७६ भदौ
वरुण धवनको बिहेको कार्ड कसकसलाई पुगेन ?
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता वरुण धवन आज आफ्नो प्रेमिकाको साथमा बैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिदै छन् ।
नयाँ फिल्मकालागि रेखाले २० किलो तौल घटाइन्
काठमाडौं । अभिनेत्री निर्देशक तथा निमात्री रेखा थापा नयाँ फिल्मको तयारीमा जुटेकी छन् । अभिनेत्री
घरबाट भागेर हिँडेका बैतडीका देवर–भाउजुको कञ्चनपुरमा मृत्यु
बैतडी । घरबाट भागेर निस्केका बैतडीको पाटन नगरपालिका–८ का देवर–भाउजूको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली अस्पतालमा मृत्यु
प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलनाबारे प्रधानन्यायाधीश राणाले भने- हामी बजारका हल्ला सुन्दैनौं
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका पछिल्ला
सुनको मूल्य आज घट्यो, हेर्नुहोस कतिमा भईरहेको छ कारोबार ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अब अनलाइनबाटै खाता खोल्न मिल्ने
उद्योग महासङ्घको पूँजी बजार समिति विस्तार
चन्द्रागिरिको आईपीओ बाँडफाँट गरियो भाग्यमानी २ जनाले पाए ११ कित्ता!
शनिवार विप्लव समूहको नेपाल बन्द
शुक्रबार घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको मूल्यमा पनि गिरावट
ललितपुरको चाँगाथलीमा श्रीमान्–श्रीमती घरभित्रै मृत फेला !
सिपाहीलाई १६ वर्षमा पेन्सन : प्रधानसेनापतिले गरे नियमावली संशोधन, अब प्रधानमन्त्रीको हातमा!
शवलाई काँधमा बोकेर पूर्व सैनिक प्रहरी चौकीमा पुगेपछि..